Ao anatin’ny fankalazana ny fetin’ny mpifankatia. Toa ny efa mahazatra azy, dia manolotra seho miaraka tamin’ireo mpanao hatsikana ny LH Pro. « Amour’rire » no lohatenin’izany amin’ity taona ity. Raha efa nahazatra ny seho hatramin’izay …Tohiny
Miditra amin’ny andiany faha-37. Ankalazaina isaka ny 21 Jona ny fetin’ny mozika. Toa ny isan-taona, manokatra ny sehatra ho an’ireo manan-talenta ny Alliance Française etsy Andavamamba, ary misokatra ho an’ireo liana ny handray anjara amin’izany …Tohiny
“Fananganana fotodrafitrasa tsy nahazoana alalana”. Izay no nilazan’ny teo anivon’ny minisitera eo anivon’ny Prezidansa misahana ny Tetikasan’ny Filoham-pirenena sy ny Fanajariana ny Tany ary ny Fampitaovana (M2PATE) tamin’ny alalan’ny tale jeneralin’ny Fanajariana ny Tany eo …Tohiny
Ambohidratrimo : Mpivady mpanamboatra basy sarona
Tafiditra tanteraka ao anatin’ny politikan’ny vondron-kery eto amintsika ny ady amin’ny fiparitahan’ny fitaovam-piadiana, ary hanaovana ezaka maro mihitsy izany mba hanjakan’ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana. Noho ny filazam-baovao marim-pototra avy amin’ny olona tsara sitrapo sy …Tohiny